K: အင်တာနက် ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘယ်သူပိုင်မလဲ
အင်တာနက် ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘယ်သူပိုင်မလဲ
အခု ရက် ထဲ..စိတ်မအား..လူ မအား ဖြစ် နေ တာနဲ့..စာအဟောင်း လေး တွေ ရှာ ရင်း.. နဲနဲ ဖြတ်ညှပ် ပြီး ပြန် တင် တာပါ။ အင် တာ နက် ဘာလဲ..ဆို တာ ကတော့..ဘလော့ဖတ် သမား တိုင်း လို သိပြီး သား မို့..နောက်ဆုံး အပိုင်း လေး ကို ပဲ..ပြန် လည် ဖော်ပြ လိုက် တယ်။ (Weekly Eleven , No 41. vol.1 2006 July မှာ ဖော်ပြ ပြီးသားလေး ပါ)
တမြန်နေ့ ကပဲ.. ICANN အဖွဲ့ကြီးက.. အင်တာနက် ဒိုမိန်း တွေ နဲ့ ပတ် သတ်လို့.. ဘာ မှ အတားအဆီး မရှိ..ကြိုက် တာ..လုပ် နိုင် တော့မယ် လို့.. သတင်း ထုတ် ပြန် လိုက် တာ ..ကြားလိုက် မိ လို့ လည်း..သတိ ရ သွား တာပါ။
နောက် တချက်က.. ခု တလော မှာ..နာဂစ် အ ပြီး မှာ.. အထူးသဖြင့်..ဗမာ နိုင်ငံသား တွေ အားလုံး .. ကုလသမဂ္ဂ အပေါ် ..အယုံ အကြည် နဲပါး နေ ခဲ့ ကြ တယ်လေ...။ UN is UNable ဆို တာ မျိုး တောင်ဖြစ် လာ ပြီ ကိုး။ တကမ္ဘာလုံး အတိုင်း အတာ နဲ့ကတော့.. လူပြော သူပြော များ နေခဲ့တာ..ကြာ လောက် ပါပြီ။ ဒါကြောင့်.. အတွင်း ရေး မှူး ကြီး ဘန်ကီမွန်း ကိုယ် တိုင်.. International Herald Tribune သတင်း စာ ကြီး မှာ.. အခု ဇွန် လ ၁၆ ရက်နေ့က..ဆောင်းပါး တစောင် ရေးသား ဖော်ပြ ရင်း..ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့..မရှိ လှ တဲ့..သိက္ခာအစွမ်း ကို ဆယ် တင် ဖို့..ကြိုးစား နေ ရ ပါတယ်။ အခု..အင်တာနက် ကြီး ကို ဘယ်သူ အုပ်ချုပ် ဦးပိုင် မလည်း ဆို တဲ့ ပြသာနာ မှာ ရော.. ကုလ အနေနဲ့..ဘယ်လောက် များ.. စွမ်း ဆောင် နိုင် အုံး မှာ မို့ လည်း...
အင်တာနက်သည်။ ဗြုံးကနဲ ဒိုင်းကနဲ ချက်ချင်း အတောင်အလက်စုံစွာနှင့် မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်ပေ။
သူ့ရဲ့သမိုင်းကို ပြန်လှန်ရမည်ဆိုလျှင်။ မွေးရပ်မြေ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီယားပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ်တခု မှာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ စတင် မွေးဖွား ခဲ့ သည်။ အမေရိကန်အစိုးရ ရဲ့ ကာကွယ်ရေးရည်မှန်းချက် သုတေသန ကနေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ တာမို့ ငယ်နံမည် က ARPANET ( Advanced Research Projects Agency Network) ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာတော့ အင်တာနက်အဖြစ်နဲ့ လူထု ကြားထဲကို ရောက်လို့လာ သည်။ ၁၉၉၆ အလွန်မှာတော့ ချစ်သူခင်သူ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်လျက် ရေပန်းစားလူသိများလာခဲ့ချေပီ။
ဘယ်သူ တာဝန်ယူ အုပ်ထိန်းမလဲ..
တကယ် အသုံးများ လာပြီဆိုတဲ့ အခါကျတော့.. ဟိုက ဒီက မှတ်ပုံတင်လာကြတဲ့.. နံပါတ် တွေ။ အဲဒါတွေကို စာသားနံမယ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ DNS ( Domain Name System) ဆိုတာ ကို ကြီးကြပ်ကိုင်တွယ်ဖို့.. စီမံခန့်ခွဲ ယဉ်ထိန်းရဲလုပ်ဖို့ အဖွဲ့အစည်း တခု လိုအပ် လာချေ ပြီ ။ဒီလိုနဲ့ ပဲ ပညာရှင်တွေ စုပေါင်းစပ်ပေါင်းထားတဲ့ NSF ( National Science Foundation) လိုအဖွဲ့ မျိူးတွေက ပထမတော့ ကြည့် ကြပ် ၀ိုင်းကြ ၀န်းကြ သည်။ အခါ အားလျော် စွာ ပဲ..IANA ( Internet Assigned Numbers Authority) ဆိုပြီး.. မူလ ပိုင်ရှင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် နဲ့ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဌါန ပူးပေါင်း ပြီး..အဖွဲ့ တခု ဖြစ်လာ သည်။ သူ့ရဲ့ အဓိက တာဝန်တွေ ကတော့.. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ တကမ္ဘာလုံး က နိုင်ငံတခု ချင်းရဲ့ သီးသန့် TLDs တွေကို ကြီးကြပ် တာဝန်ယူဖို့ ပါ၊
ဒီနေရာမှာ TLDs ရဲ့အရှည်က Top Level Domain Name ဖြစ် ပြီး internet web sites တခုရဲ့ နောက်ဆုံးက အတိုကောက် အမည်လေးများ ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အခု IANA ကနေ နိုင်ငံများနှင့် ဆိုင်သော အမည်ပေး စနစ်ကို တာဝန်ယူမည်ဆိုတော့.. ကျန်သော .com, .org, .biz , .net အစရှိ တဲ့ အမှတ်သညာများသည် အလိုအလျောက်ပင် NSI ( Network Solution Inc) ဟု အမည် ရသော အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ကြီး တခု ထံသို့ ကန်ထရိုက် စနစ်ဖြင့် ရောက်ရှိသွားတော့သည်၊ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. သေချာတာကတော့ မည်သူ တဦးတယောက် တဖွဲ့ တနိုင်ငံ ကမဆို အင်တာနက် ကြီးထဲမှာ နေရာတခု ရှိချင်ပီ ဆိုရင် အမေရိကန်နှင့် ကင်းလို့မဖြစ် တော့ပေ။
ရှုပ် နေ သော အဖွဲ့ များ
ဒီလိုနဲ့ လည်း အဆင်ချော မနေ သေး။
၁၉၉၆ ခုနှစ် ၀န်းကျင်ခန့် .com ရောဂါများ အကြီး အကျယ် ထလာခြင်းနှင့် အတူပင်..NSI ၏ တဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မူ.. အမေရိကန် လက်ဝါးကြီး အုပ်.. ချူပ်ကိုင်မူ အပေါ် ပွစိပွစိ ဖြစ်လာ ပြန်သည်။
ဒါဆိုလည်း ကိစ္စ မရှိ။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မှာ.. အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ဌါနက အင်တာနက် အမည် နေရာစီမံ ကွပ်ကဲမူ ဆိုင်ရာ စာတမ်း တခု ထုတ်လိုက် ပြီး... နိုင်ငံတကာအကျိူး အမြတ် မယူသော ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး တခုကို ဖန်တီး ပေးလိုက် သည်။ အင်တာနက် အသုံးများသော စက်မူ နိုင်ငံကြီး တချိူ့ မှ ကိုယ်စားလှယ် များကိုလည်း ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် များအဖြစ် ခန့်အပ် ပေး ထား သည်။ အဲဒီ လို နဲ့ပဲ..ခု လက်ရှိ တကမ္ဘာလုံး က..အင်တာနက် နေ ရာ တွေ ကို တာဝန်ယူ ကြီး ကြပ် နေတဲ့ ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) အဖွဲ့ကြီး ပေါ် ပေါက် လာ ခဲ့ တော့သည်။
သို့ပေမဲ့..ဝေဖန်မူ တွေ နဲ့ ကျေလည် မူ တော့..အပြည့်အ၀ မရှိ သေးပေ။ အင်တာနက် ဆိုတာကြီးကို..အမေရိကန် လက်ထဲ မှ.. တောင်းသုံး နေ ရ သည်ကို.. မကျေ နပ် နိုင် သော..နိုင်ငံ များ က..ရှိ နေသည်။
နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စား လှယ်များ ပါသည် ဆို သော်လည်း အမေရိကန်ကသာ အများစုဖြစ်နေခြင်း...NSI ကပဲ နည်းပညာ ပိုင်းကို ဆက်လက် တာဝန် ယူထားခြင်း.. ဆိုတဲ့ အချက်တွေ က ဒီအဖွဲ့ ကြီး အပေါ် မျက်စိ ဒေါက်ထောက် ကြည့်စရာတွေ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ဒီကြားထဲ.. ICANN နဲ့NSI ကြားထဲ အဝေ မတည့်မူ ပြသာနာ လေး တွေ ကလည်း လူသိရှင်ကြား ဖြစ်ခဲ့ ရသေးသည်။ အဖွဲ့ ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက် နှာ ပေါ်မှာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွေ မူကြမ်းတွေ ကို ဘယ်သူမဆို ကြည့်နိုင် သိနိုင်အောင် လွှင့်တင် ပြသ ထားပေမဲ့လည်း... ဒါတွေဟာ ဟန်ပြသာဖြစ်ပီး တကယ် ထင်သာ မြင် သာမရှိ.. ထိန်ချန်မူ အချိူ့ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ အသံတွေက ထွက်ပေါ် လာပြန် သည်။ အဖွဲ့ ထဲက ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ကိုယ်တိုင် ကတောင် ငွေကြေး စားရင်းအင်း တချိူ့ သိလိုမူနဲ့ တရားရုံးကို ဦးတိုက် လျှောက်ထား တာမျိူးတွေ တောင် ရှိလာခဲ့သည်။ အဖွဲ့ရဲ့ ပုံမှန် နှစ်လည် အစည်းအဝေး တွေ ကို မထင်မရှား နိုင်ငံငယ် လေးတွေမှာ လုပ်လေ့ ရှိတာကရော ဘာသဘောလည်း ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိူး တွေ ကိုတော့.. ဒါဟာ အားနည်းတဲ့နိုင်ငံလေးတွေအတွက် အင်တာနက် သိမြင်ပြန့် နှံ့ မူ အတွက်.. တမင်ရည်ရွယ်တာပါ လို့ ဆင်ခြေ ပေး နိုင် သေး သည်။
ပင်လယ်တပြင်လုံးက ယိုသမျှ ပုဇွန်ဆိတ်ခေါင်း မှာ လာစုသလို ကမ္ဘာတခွင်လုံးက ဖြစ်သမျှ ရှင်းမရတဲ့ ပြသာနာ ကုလ ရုံးခန်းထဲ ရောက်လာ ရပြန်ပီ။ စကား နားထောင်တာ မထောင်တာ အပထားလို့ ကုလသမဂ္ဂ အနေနှင့် တော့ ပုဇွန်ဆိတ် ခေါင်းထက် တော့ ပိုကြီးပြ ရပေ လိမ့်မည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ မှာတော့ သတင်း အချက်အလက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ထိပ်သီး ညီလာခံကြီး ကို ဆွစ်ဇာ လန် နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့ တွင် ခေါ်ယူ ကျင်းပ လိုက် သည်။ ကမ္ဘာ့ ပြသာနာ ဆိုတာမျိူး တွေကလည်း ချက်ချင်း လက်ငင်း အဖြေရှာဖို့ ခက်တာမျိူး မို့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တရပ် ဖွဲ့စည်း ပြီး.. ညီလာခံ ပထမပိုင်းကို အဆုံးသတ် လိုက် သည်။ တနှစ်ခွဲလောက် အကြာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လပိုင်း တွင် မှ.. ဆုံးဖြတ်ချက် ဆန်ဆန် စာတမ်း တခု ထွက်လာ ခဲ့ချေ ပြီ။
ဒီစာတမ်းမှာပါတာက.. အင်တာနက်အသုံးပြုမူဟာ နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာ နဲ့ ဖြစ်လာ နေပီမို့ တဦး တဖွဲ့ တနိုင်ငံ တည်းက ချူပ်ကိုင် ထားခြင်း သည် မလျော်ကန် ပါကြောင်း.. ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံတကာ ပါဝင် ပတ်သတ် မူဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီး ပါကြောင်း... စသဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ သူက ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ နည်းလမ်း ၄ သွယ်ကို လည်း ချပြထား ပါသေးတယ်။ အဲဒီထဲ က နည်းလမ်း ၂ခု ကတော့ ကုလသမဂ္ဂ ပိုင် ပြုလုပ် ဖို့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ဖြစ်ပီး ကျန်၂ခု ကတော့.. ယခုလက်ရှိ ICANN အဖွဲ့ကြီး ကပဲ..ပိုမို ထင်သာ မြင်သာ အောင် ဘယ်လို ဘယ်ပုံ လုပ်ဖို့ ဆိုတာ တွေကို အကြံပြု ထားပါတယ်။
မူရင်း ပိုင်ရှင် မသိရော့ လေသလား
ယမ်းပုံ မီးကျ ဒေါသ ထွက်ရသူက အမေရိကန် များပင်။
ငါတို့ ဒီလောက် လိုက်လိုက် လျောလျော အဆင်ပြေ အောင် လုပ်ပေး ထားပါရဲ့ နဲ့ သင်းတို့က ရာရာ စစ ဆိုတဲ့ အသံမျိူး တွေ အမေရိကန် အဖွဲ့အစည်း များ ကြားမှ ကျယ်လောင် စွာ ပေါ်ထွက် လာခဲ့ သည်။ သူတို့ မြေပေါ်မှာ မွေးဖွား မြေ တောင် မြှောက်ခဲ့ရတဲ့ အင်တာနက် သမီးပျိူ ကို သူတို့ရဲ့ သမိုင်းဝင် ပိုင်ဆိုင်မူ တခု အနေနှင့် တပါးသူ လက် ၀ကွက်တော့ မအပ်နိုင်တာ အဆိုးဖြင့်မဆိုသာ။
ဘယ်လို နည်းနဲ့ မဆို ..ဒီ အင်တာနက် နေရာ ချထားပေးရေး ရဲ့ နောက်ကွယ် ကရော ရှေ့ကရော ရရှိ နေတဲ့ အခွန်အခ များ ကလည်း ရှိသေး သည်ကိုး။ ဒါတွေကို အမေရိကန် က အလွယ်တကူ လက်လွှတ် အဆုံးခံ မည်တဲ့လား။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ထုတ် The New American မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံး ဆောင်းပါး မှာဆိုရင် ဒီအကျိူးအမြတ် တွေကို မက်မောလို့လား လို့ ကုလအဖွဲ့ကို တင်မက အတွင်းရေးမှူး ကိုဖီအာနန် ကိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ တိုက်ခိုက် ထားပါ တယ်။ ပြောစရာ ဖြစ်နေတာ ကလည်း မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ပေါ် လာတဲ့ အီရတ် နိုင်ငံ အပေါ်ကန့်သတ် သည့် အစာနှင့်ရေနံ လဲလှယ်ရေး ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံကြီး ကလည်း ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အတွင်းရေးမှူး ကြားမှာ မပြီး မပြတ် သေးပေ။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုလ အရာရှိ ကတော့ ဂျနီဗာ ထိပ်သီးမှာ ပြောသွားခဲ့ပြီ။
` ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင် နေတာဟာ အင်တာနက်ရဲ့ အနာဂါတ် စီမံ ကွပ်ကဲရေး ကိုပါ...ကမ္ဘာ့ လူသား အားလုံးအတွက် သဘာဝ အရင်းအဖြစ် တခုလို ဖြစ်လာနေတဲ့ အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ကြမလည်း.. ဆိုတာပါပဲ...´
ဒီစကား ဟာ အမေရိကန် တွေ အတွက်တော့ ငေါ့စရာ လှောင်စရာတခုပါပဲ။
သူတို့ ပြောတာက.. ဒါဆိုရင် ဂျာမဏီ နိုင်ငံဟာ သူ့နိုင်ငံ က ထုတ်တဲ့ ဗောက်စ်ဝက်ဂွန် နဲ့ ဘီအမ်ဒဗလျူ ကားတွေကို တကမ္ဘာလုံး က လူတွေ ဈေးချိူချိူ နဲ့ကားစီး နိုင်အောင် ကုလသမဂ္ဂ ကို လှူပါ သလား တဲ့။
ဖင်လန် နိုင်ငံ ကရော သူရဲ့ အမှတ် တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Nokia လက်ကိုင်ဖုန်း တွေကို လူတွေ အားလုံး လက်ကိုင်ဖုံး ရှိသင့် တယ် ဆိုပီး ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ နိုင်ငံ တကာ ကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့ကြီးကို ကမ်းလှမ်း ပါသလား ... ဂျပန် ဆိုနီ ကော်ပို ရေးရှင်းကြီး ကရော သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ကွန်ပြူတာဂိမ်းစ် ကစားနည်း ပညာကို UNICEF ကုလ ကလေးများ ရံပုံငွေ အဖွဲ့ က တဆင့် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ နိုင်ငံတွေက ကလေးငယ်တွေ ကစားရ အောင် ထောက်ပံ့ ပါသလား....တဲ့။
အတော် လည်း စွာတဲ့ အမေရိကန် များ ပါပင်။
ဟစ် တိုင် မှာ ငြင်း ရ အုံးမဲ့ အင်တာနက်
၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လ လယ်ပိုင်း တွင် မပီးမပြတ် သေးသော ညီလာခံ ဒုတိယပိုင်းကို တူနီးရှား နိုင်ငံ တူးနစ်စ်မြို့မှာ အဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့ သည်။ တကယ့် တကယ်မှာတော့ အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ ခြင်းသာ ဖြစ်၍ ပြသာနာ ကိုတော့ အဆုံး မသတ် နိုင်ခဲ့ပေ။
လောလော ဆယ်ဆယ် မူလ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ICANN ကပဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် သွားဖို့ သဘောတူ ခဲ့ကြပီး.. အဲဒီ သဘော တူညီမူ ရရန် တဖက်လှည့် လိုက် ရတာကတော့... လွတ်လပ်တဲ့.. အစိုးရရော အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့များပါ- ပါဝင်တဲ့ -အင်တာနက် ကွပ်ကဲမူ ဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ Forum ကြီး- ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် လိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ကဲ.. မကျေလည် တာတွေ ...ထောက်ပြ ချင် တာတွေ ... ပြောကြ..ဆိုကြ... ငြင်းကြ.. ခုံကြ ပေတော့။
ကုလအဖွဲ့ ကြီး အနေနဲ့လည်း ဒီလို မြွေမသေ ဒုတ်မကျိူး နည်းဗျူဟာ ထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်နိုင်စရာ အကြောင်း မမြင်ပေ။ ဗြဟ္မာကြီး ဦးခေါင်းကို အနေအထား တမျိူး ပြောင်းကိုင် လိုက်ခြင်း အားဖြင့် အခိုက်အတန့် တော့ အညောင်း အညာပြေ နိုင်ကောင်း ပြေပေလိမ့်မည်။
အာဏာရှင်တို့ အကိုကြီး ဗြူရိုကရက်
သဘော တူညီချက် ထွက်ပီး နောက်တနေ့ မှာပဲ.. အမေရိကန်ဥပဒေပြု လွှတ်တော်မှ အမေရိကန် အစိုးရ အနေနှင့် ICANN ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များအပေါ် ဆက်လက် ထိန်းချူပ် ကွပ်ကဲ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း.. အင်တာနက် နေရာ ချထားရေး အစီအစဉ် များဟာ နည်းပညာ ပိုင်းသာမက စက်မူပိုင်း ဆိုင်ရာ တည်နေရာ အရလည်း အမေရိကန် မြေပေါ်မှာပင် ရှိသင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့် စာတမ်းတစောင် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။ ဆိုလိုတာ ကတော့...လောလော ဆယ်ဆယ် တင်မက ဘယ်သော အခါမှ သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် နဲ့ ရပ်တည်ချက် ကို အလျော့ပေး မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကို .. အတိအလင်း ကြေငြာ လိုက်တာ ပါပဲ၊။ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ အဖွဲ့ကလည်း အမေရိကန်ရဲ့ အင်တာနက် ချူပ်ကိုင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ကို ကုလသမဂ္ဂတင်မက ဘယ်နိုင်ငံတကာ ဆိုတာမျိူး ကိုမှ ... ဘယ်သောအခါမှ လွှဲပြောင်း မပေးဖို့ကို.. သမ္မတကြီးကို အတိအလင်း တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် အူတာ့ ပြည်နယ်ရဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးဖြစ်တဲ့ ခရစ်စ်ကန်နွန် ကတော့-
ဖွံ့ဖြိုးမူ နှေးကွေးတဲ့ တိုင်းပြည် တွေမှာ အင်တာနက် ကနေ ရလာမဲ့ စီးပွားရေးအရ အကျိူး ဖြစ်ထွန်း လာနိုင်ချေ တွေဟာ တကယ့်တကယ် ကုလသမဂ္ဂ က ပေးနေတဲ့ ထောက်ပံ့ ကူညီမူတွေ ကို တောင်.. အပြတ်အသတ်ကျန်ရစ် စေ ခဲ့မှာပါ.. လို့.. သရော်လိုက်ပါတယ်။
`... ဒီလို ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ အသိဥာဏ် ဗဟုသုတနဲ့ ဖွဲ့ ဖြိုး တိုးတက် မူ တွေကို ဖော်ဆောင် ပေးနေတဲ့ ပဉ္စလက် ကြီးကို ကိုင်တွယ် မောင်းနှင်ဖို့ အတွက် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ် တဲ့ အာဏာရှင် နိုင်ငံတွေ က သူတို့ လိုရာကို ကြိုးဆွဲ ဖို့..လုပ် နေတဲ့ ဗြူရိုကရက်အဖွဲ့ ကြီးရဲ့ လက်ထဲကို ထဲ့ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လို နည်းနဲ့ မှ ယုတ္တိ မတန်ပါဘူး..´ လို့ လည်း စွပ်စွဲ လိုက်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ အထင်ကရ ပါဝင်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ရုရှနိုင်ငံ တွေကို ရည်ညွှန်းဟန် တူပါတယ်။
အထူးသဖြင့် တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ အင်တာနက် လွပ်လပ်ခွင့် ဆိုင်ရာ ပိတ်ပင် ကန့်သတ်မူ တွေဟာ ယခုလက်ရှိ အခြေအနေ အရ တကမ္ဘာလုံး မှာ ဟိုးလေး တကျော် ဖြစ်နေသည် မဟုတ်လား။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက် ကွပ်ကဲမူ ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ဟစ်တိုင် ကြီး ကိုတော့ မကြာခင် လများ အတွင်း ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့ မှာာ တဖန်စိုက်ထူ ကျင်းပ ရပေဦးမည်။
အင်တာနက်ကို ဘယ်သူ အပိုင် ပြုသင့် သလည်း ဆိုတဲ့ မလွယ်လှ သောပြသာနာကို ဆက်လက် အဖြေရှာကြ ရပေဦးမည်။
Ref: "United Nations aims to control the Internet", The New American , Dec 12, 2005
Labels: Printed , Reviews
သူများတွေအင်တာနက်ဘယ်သူပိုင်မလဲ ငြင်းနေချိန်ရောက်တဲ့ထိ အင်တာနက်ဆိုတာဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ကျနော့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ကျနော်ပိုပိုပြီး သတိရမိပါတယ်။ သူတို.လေးတွေ အသိဥာဏ်တိုးအောင်၊ ရင့်သန်အောင်ပျိုးထောင်ဖို. အဖြစ်က ကျနော့ကို နေဆယ်စင်းလိုပူလောင်စေပါတယ်.....
သူများတွေ ကမ္ဘာနှင့်ချီ၊ စကြာဝဠာနဲ့ ချီ အလုပ်လုပ်၊ စကားများ နေကြချိန် ကျွန်တော်တို့က အမျိုးအချင်းချင်း စကားများလို့ ကောင်းတုန်း..
စကားမစပ်. အမေရိကန်တွေလည်း စကားနာ အတော် ထိုးတတ် ကြတာပဲဗျ.. :D
ဆောင်းပါးကို ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါပဲ မှော်ဆရာ။ မှော်ဆရာရေးနေတဲ့.. ယူနီကုဒ်မြင်းရိုင်း ဆောင်းပါးတွေလည်း..သဘောကျမိတယ်။ ခေတ်မှီမှီ ကမ္ဘာကြည့်ကြည့်မြင်ပေါ့လေ။။။ ရွာသားလေးရေ- စိတ်မပူပါနဲ့.. ခေတ်ကြီးကပဲ သယ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။